Howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay Sh/Dhexe – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay Sh/Dhexe
Howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay Sh/Dhexe
Wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan Gobalka Sh/Dhexe ayaa sheegaya in howlgal isugu jira duqeyn iyo weerar toos ah lagu qaaday deegaanka Gamboole oo ka tirsan gobolkaas.
Dadka degaanka ayaa VOA u sheegay in bartimaaledka duqeynta uu ahaa dhismooyin ay degenaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, xafiisyo iyo xaruumo garsoor iyo kuwa tababar.
Weerarka oo ahaa mid qorsheysan ayaa la sheegay in uu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray malayshiyaadka Al-Shabaab, waxaana la sheegay ciidamada howlgalka fuliyay in ay isugu jireen Soomaali iyo ciidamo Mareykan ah inkastoo aan wali la xaqiijin
Masuul magaciisa ka gaabsaday oo ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in ugu yaraan 8 ka tirsan Malayshiyada Al-Shabab howlgalka lagu dilay. Sidoo kale laba qof oo shacab ah ayaa weerarka ku dhintay, 4 kalana dhaawac ayaa soo gaaray.
Saraakiisha Al-Shabaab ee weerarka ku dhintay ayuu masuulka Hirshabelle ka tirsan uu ku sheegay in ay gaarayaan ilaa 3 xubnood, oo ay ku jiraan madaxii dacwada Degaanka Gambole iyo ku xigeenka madaxada guud ee maaliyada Al-Shabaab.
Deegaanka Gamboole ayaa ah saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Sh/dhexe. Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowlada Soomaaliya.
Previous articleWasiirkii dastuurka Soomaaliya oo geeriyooday
Next articleFarmaajo oo ka bilaabay dalka Kenya dhaqankii iibsashada saxaafadda iyo dowlada Kenya oo ka warheshay (Xog)
Si looga hortago timo Daadashada .. Cuntadu sameyn ma ku yeelan...
Somaliland: Ardayda Saboolka ah oo Helaya Deeq Waxbarasho